က်ေနာ္တခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ လိင်ကစားခြင်းလုပ်ငန်းဟာသားဆက်ခြားသောက်ဆေးအတွက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာပါ။ ၿပီးေတာ့ေျခစြမ္းကေနအေျပာင္းအေရႊ႕ဟာဂိမ္းကစားသူေတြနဲ႔ေဘာလံုးသမားေတြအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ်းများကိုဂရပ်ဖစ်ရှုထောင့်မှဖန်တီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုအဆင့်မြင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလှပသောအသိုင်းအဝိုင်း၏စစ်မှန်သောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေသောလိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူတက်လာရန်စိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်အရာများစွာရှိသောဖန်တီးမှုလွတ်လပ်သောတီထွင်သူများအားအခွင့်အလမ်းပေးသည်။, အကြှနျုပျတို့သညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာထဲမှာအခမဲ့အရာအားလုံးကိုကစားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအခမဲ့လိမ်များညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းပေါ်မှာရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းများကိုစုဝေးစေ။ သငျသညျဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်နှင့်သင်ရသောအပျော်တမ်းအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးကြကုန်အံ့တံ့သောစိတ်ကြိုက်မီနူးများကဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်အားဖြင့်အံ့သြလိမ့်မည်။ ဒီဝက်ဆိုက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်းမျိုးနွယ်စုနဲ့အမျိုးအစားတွေအမျိုးမျိုးရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒါကပုံမှန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်လိုပဲဖြစ်တယ်,ဒါပေမဲ့အစားငယျမြားနှငျ့ပတျသကျ.
ဆိုက်၏နာမကိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်,ဒီမှာအားလုံးဂိမ်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်တစုံတခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုပါ,သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုပါနှင့်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပုံစံမဆိုကြင်နာဖြည့်စွက်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ. ကျနော်တို့ပရိသတ်တွေသူတို့စိတ်ကူးယဉ်အသက်ရှင်နိုင်မည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ပေးစေခြင်းငှါဤဆိုဒ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ လာကြခြင်းနှင့်ယခုအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့။
ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အများဆုံးကွဲပြားခြားနားစုဆောင်းခြင်းပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကျော့ကွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များရ။ သင်ဖြောင့်လိုက်မှဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သင်အမာခံလိင်ဆောင်တတ်၏အရာတစ်ခုခုကစားချင်တဲ့အခါ,သင်ရုံသင်ဒီမှာတွေ့လိင်။ ဤဂိမ်းများတွင်သင်လိုချင်သည့်သို့သော်လက်ကောက်များဇာတ်ကောင်များကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ ထိုထိပ်ပေါ်မှာ,သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ရ. မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တောင်မှလိင်တူချစ်သူနှင့်အတူလာ,ကွီးမွတျမွတျသောသားမွေးဘို့.
သင်ပိုမိုနုနှင့်အတူဂိမ်းချင်လျှင်,သင်သည်သင်၏ကြက်ဆူသီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အပျော်တမ်းခံစားရအတိအကျဘယ်လိုကြည့်ရှုစေနိုင်သည်အရာအတွက်,ထို့နောက်သင်ကျနော်တို့ဆောင်ကြဉ်းသောစုဆောင်းခြင်းရိန်းလိင်ဂိမ်းများကိုထုတ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းများတွင်သင်သည်စွန့်စားသူအမျိုးမျိုးနေထိုင်လိမ့်မည်။ သငျသညျမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရှာနေမြေပုံကျင်လည်ကျက်ပါလိမ့်မယ်သင်ကသူတို့ကိုလိုက်ပါလိမ့်မယ်ရှေ့တော်၌ထိုသူတို့၏စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နောက်ကျောပုံပြင်များထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္အေနာက္တိုင္းပရိသတ္အတြက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ႔ဖူးတဲ႔ လက္ေဝွ႔ပြဲေတြေတာင္ရွိခဲ႔ပါတယ္။ တကယ်တော့မူရင်းဂျပန်တီထွင်သူတွေအတွက်ဂိမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအတွက်ပဲဂိမ်းကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့စာသားကိုအခြေခံထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုတွင်ရသောအရာနှင့်ဆင်တူသည့်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်,ဒါပေမယ့်လည်းဇာတ်လမ်းလိုင်းပြောင်းလဲ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များမှတဆင့်ဂိမ်း၏အဆုံးသတ်ရေး။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်လာသောအခါ,သင်အသက် 18 ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုမှတပါး,သင်ဘာမှလုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင်န့်အသတ်ဂိမ်းကစားရဘယ်မှာအခမဲ့ပလက်ဖောင်းပါပဲ။ နှင့်အမွေးရပ်ရွာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုက်နှစ်သက်ပုံကိုငါသိ၏,ဒါကြောင့်ငါတို့သည်လည်းအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရပ်ရွာအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ၊ကျနော်တို့မှတ်ချက်အပိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆိုက်အပေါ်ဖိုရမ်၊ကျနော်တို့မကြာမီဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းရပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့ကြီးစွာသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။, အားလုံးဂိမ်းများနှင့်စကားစုများအတွက်ဖော်ပြချက်သင်စက္ကန့်အတွင်းလိုအပ်သောအကြောင်းအရာမျိုးကိုရောက်ရှိကူညီပေးပါမည်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ဆိုဒ်တွင်အချို့သောကြော်ငြာများရှိပေမယ့်,သင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့မဆိုပေါ့ပ်တက်သို့မဟုတ်အခြားအရာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အားလုံးအတွက်,ဒီမဆိုအမွေးဝါသနာအိုးများအတွက်ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။